Waa maxay faa'iidooyinka isticmaalka dumbbells ee jimicsiga muddada dheer?
1. Hagaajinta xakamaynta muruqa Dumbbells waxa kaliya oo lagu xakameeyaa habka loo hayo.Haddii aadan lahayn awood kontorool oo wanaagsan, sida koontaroolka, waxaad u leexan kartaa bari iyo galbeed.Markaa haddii aad rabto inaad ilaaliso jihada iyo miisaanka dumbbells, waa inaad barataa inaad caawimaad ka raadsato murqaha kale ...
Ma garanaysaa saamaynta sixirka ee kooxaha iska caabinta?
Marka la barbar dhigo dumbbells, barbells, iyo qalabka kale, kooxaha iska caabbinta waxay leeyihiin faa'iidooyin aad u muuqda.1. Codsiga kuma dhowa in la xaddido goobta 2. Aad u fudud in la qaado 3. texture jilicsan, 360 ° tababar aan xagal dhintay, ku dhawaad ​​cadaadis on kala goysyada 4. Waxaa loo isticmaali karaa sida tr weyn ...
Shan dhaqdhaqaaq oo aasaasi ah oo kettlebells ah oo ay tahay in kuwa xiiseeya jirdhiska ay ogaadaan
Kettlebells ayaa aad caan uga ah goobta jimicsiga.Maadaama ay jiraan fursado badan oo miisaan, waxaa isticmaali kara ragga iyo dumarka labadaba.Waxaana qalabkan isboorti loo isticmaali karaa falal kala duwan sida riixida, qaadista, qaadista iyo tuurista.Sababtoo ah kala duwanaanshaheeda iyo sahlanaanta isticmaalkeeda, kettlebells waa la jeclaaday...
Yoga-da hawada ayaa sawirkaaga ka dhiga mid qurux badan oo qurux badan
Dad badan ayaa aad u xiiseeya yoga.Laakiin waxay ka baqayeen in yoga ay aad u adag tahay, sidaa darteed ma ay tijaabin.Dhab ahaantii, yoga ma aha mid adag sida qof kastaa u maleynayo.Muddo ka dib, dabacsanaanta jidhku waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan.Way sahlanaan doontaa in la sameeyo dhaqdhaqaaqyo adag...
Samee Jimicsiga Kubbada Yoga, Ha dhuuban oo Sii Koritaanka Muruqyada
Jimicsiga kubbadda Yoga waxay ku habboon yihiin dadka shaqeeya ee mashquulsan oo waqti yar oo jimicsi leh.Isticmaal kubbadaha yoga si aad u jimicsato jirka oo dhan, samee tababarka kooxda murqaha, iyo sidoo kale dulqaadka iyo tababarka aasaasiga ah.Ku diyaari kubbadda yoga guriga.Kubadda yoga lafteedu ma qaadato meel aad u badan.Waxaan dib u...
Sidee Loo Isticmaalaa Gargaarka Caloosha?
Taayirrada calooshu waa qaab-dhismeed fudud, codsi ku habboon, iyo saameyn muuqata oo yaraynta caloosha.Taayirada caloosha waxaa loo isticmaali karaa jimicsiga caloosha ee guriga.Saameyntu aad ayey uga fiican tahay fadhi-ku-dhigga dhaqanka. Sidee loo adeegsadaa giraangiraha caloosha?Maxay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho inta lagu jiro isticmaalka?1....
Dumbbell la hagaajin karo, Qiimaha Dumbbell, Tpe Yoga Mat, Yoga Mat, Dumbbell Set, Eco Friendly Yoga Mat,